ကွန်ကာကပ်ဖ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ ကော်စတာရီကာ
17 Jun 2018 . 1:45 AM
ဗဟိုအမေရိက Central America က အသင်းတွေထဲမှာ ကော်စတာရီကာဟာ အောင်မြင်မှု အများဆုံးရ ယူထားတဲ့အသင်းအဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ကွန်ကာကပ်ဖ်ချန်ပီယံရှစ် ချန်ပီယံ(၃)ကြိမ်၊ Copa Centroamericana (၈)ကြိမ်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင် Central America အသင်းတွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို (၄)ကြိမ်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ တစ်သင်းတည်းသောအသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းက မန်စီးတီးအသင်းမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ပေါ်လိုဝမ်ချော့ပ်Paulo Wanchope နဲ့ ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူး ကြီး ဖွန်ဆက်ကာ Rolando Fonseca တို့ရဲ့ ခေတ်တစ်ခုမှာ ကော်စတာရီကာအသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ထိုက်သင့်တဲ့အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုအချိန်မှာလည်း High Profile ကစားသမား များများစားစားမရှိပေမယ့် Quality Players တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် ပြိုင်ဘက်တွေကို ဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းတစ်သင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာပါ . . .
အီတလီနိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှ ပထမဆုံးအကြိမ် ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကော်စတာရီကာအသင်းဟာ ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲမှာပဲ ရှုံးထွက်အဆင့်အထိ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကော်စတာရီကာ အသင်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွေတုန်းက ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပြီး အခု တစ်ကြိမ်က သူတို့အတွက် (၅)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖ လားပြိုင်ပွဲက အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိ အောင် မြင်မှုရခဲ့တယ်။
ကွန်ကာကပ်ဖ်ဇုန်မှာ ကော်စတာရီကာအသင်းဟာ နာမည်ကြီး အမေရိကန်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားသွားခွင့်လက်မှတ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်အသင်းကို အိမ်ကွင်း၊ အဝေးကွင်း နှစ်ကျော့ စလုံး အနိုင်ကစားခဲ့ပြီး မက္ကဆီကို၊ ပနားမားအသင်းတို့နဲ့ပွဲတွေမှာသာ ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တာပါ။ (၁၀)ပွဲကစား (၄) ပွဲနိုင်၊ (၄)ပွဲသရေ၊ (၂)ပွဲရှုံး (၁၆)မှတ်နဲ့ မက္ကဆီကိုအသင်းရဲ့နောက် ဒုတိယနေရာနဲ့ တိုက်ရိုက်ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ဂိုးပေါက်မှာ အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားကြီး ကေလာနာဗတ်စ် Keylor Navas ၊ ၀ါရင့်တိုက်စစ်မှူး ဘရိုင်ယန်ရုဇ် Bryan Ruiz ၊ ကွင်းလယ်က ဆယ်လ်ဆိုဘော်ဂတ်စ်စ် Celso Borges တို့က အသင်းရဲ့ အဓိက အမာခံကစားသမားတွေဖြစ်လာမှာပါ။ ဥရောပအခြေစိုက် ကစားသမား အနည်းစုသာ ပါဝင်ပြီး ပြည်တွင်းလိဂ်နဲ့ မေဂျာလိဂ်မှာ ကစားနေတဲ့ ကစားသမားအများစုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသင်းတစ်သင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Photo:Goal.com,Getty Images,The Tico Times
ကှနျကာကပျဖျရဲ့ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနတေဲ့ ကျောစတာရီကာ
ဗဟိုအမရေိက Central America က အသငျးတှထေဲမှာ ကျောစတာရီကာဟာ အောငျမွငျမှု အမြားဆုံးရ ယူထားတဲ့အသငျးအဖွဈ ရပျတညျနပေါတယျ။ ကှနျကာကပျဖျခနျြပီယံရှဈ ခနျြပီယံ(၃)ကွိမျ၊ Copa Centroamericana (၈)ကွိမျရရှိခဲ့တဲ့အပွငျ Central America အသငျးတှထေဲမှာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲကို (၄)ကွိမျယှဉျပွိုငျခဲ့ဖူးတဲ့ တဈသငျးတညျးသောအသငျးလညျးဖွဈပါတယျ။ တဈခြိနျတဈခါတုနျးက မနျစီးတီးအသငျးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ပျေါလိုဝမျခြော့ပျPaulo Wanchope နဲ့ ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူး ကွီး ဖှနျဆကျကာ Rolando Fonseca တို့ရဲ့ ခတျေတဈခုမှာ ကျောစတာရီကာအသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ထိုကျသငျ့တဲ့အဆငျ့တဈခုကို ရောကျရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာလညျး High Profile ကစားသမား မြားမြားစားစားမရှိပမေယျ့ Quality Players တှကေို ပိုငျဆိုငျထားတာကွောငျ့ ပွိုငျဘကျတှကေို ဒုက်ခပေးနိုငျစှမျးရှိတဲ့အသငျးတဈသငျးအဖွဈ သတျမှတျရမှာပါ . . .
အီတလီနိုငျငံမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှ ပထမဆုံးအကွိမျ ခွစေဈပှဲ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ကျောစတာရီကာအသငျးဟာ ပထမဆုံးပွိုငျပှဲမှာပဲ ရှုံးထှကျအဆငျ့အထိ တကျရောကျခဲ့ပါတယျ။ ကျောစတာရီကာ အသငျးဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ၁၉၉၀၊ ၂၀၀၂၊ ၂၀၀၆၊ ၂၀၁၄ ခုနှဈတှတေုနျးက ပါဝငျယှဉျပွိုငျခဲ့ဖူးပွီး အခု တဈကွိမျက သူတို့အတှကျ (၅)ကွိမျမွောကျ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲလညျးဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖ လားပွိုငျပှဲက အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ တကျရောကျနိုငျခဲ့တဲ့အထိ အောငျ မွငျမှုရခဲ့တယျ။
ကှနျကာကပျဖျဇုနျမှာ ကျောစတာရီကာအသငျးဟာ နာမညျကွီး အမရေိကနျကို ကြျောဖွတျပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားသှားခှငျ့လကျမှတျကို ရယူနိုငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျအသငျးကို အိမျကှငျး၊ အဝေးကှငျး နှဈကြော့ စလုံး အနိုငျကစားခဲ့ပွီး မက်ကဆီကို၊ ပနားမားအသငျးတို့နဲ့ပှဲတှမှောသာ ရှုံးပှဲတှခေဲ့တာပါ။ (၁၀)ပှဲကစား (၄) ပှဲနိုငျ၊ (၄)ပှဲသရေ၊ (၂)ပှဲရှုံး (၁၆)မှတျနဲ့ မက်ကဆီကိုအသငျးရဲ့နောကျ ဒုတိယနရောနဲ့ တိုကျရိုကျခွစေဈပှဲ အောငျမွငျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ဂိုးပေါကျမှာ အကောငျးဆုံးကာကှယျမှုတှလေုပျခဲ့တဲ့ ဂိုးသမားကွီး ကလောနာဗတျဈ Keylor Navas ၊ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး ဘရိုငျယနျရုဇျ Bryan Ruiz ၊ ကှငျးလယျက ဆယျလျဆိုဘျောဂတျဈဈ Celso Borges တို့က အသငျးရဲ့ အဓိက အမာခံကစားသမားတှဖွေဈလာမှာပါ။ ဥရောပအခွစေိုကျ ကစားသမား အနညျးစုသာ ပါဝငျပွီး ပွညျတှငျးလိဂျနဲ့ မဂြောလိဂျမှာ ကစားနတေဲ့ ကစားသမားအမြားစုနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အသငျးတဈသငျးလညျးဖွဈပါတယျ။